Guddoomiyaha isboortiga Olimbikada G/Dhexe ee Galmudug oo lagu soo dhaweeyay Minnesota.
Xaflad si aad ah loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweynayay , laguna sharfayay Guddoomiyaha Isboortiga Olimbikada gobolada dhexe ee Galmudug mudane C/rashiid Cabdullahi Maxamed (Cabdirashiid Foonka), oo dhawaan loo soo magacaabay xilkaasi ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Iyadoo ay halkaasi goob joog ka ahaayeen jaaliyadda isboortiga ee gobolka Minnesota.
Gabdhaha Horseed oo ku guulaystay koobka Jen.Daa'uud.
Gabdhaha kubadda kolayga ee naadiga Horseed ayaa ku guulaystay koobka kubadda kolayga Jen.Daa'uud oo ay sanadkan ku loolamayeen ayaga iyo kooxdada Heegan oo ay kulankan guul ka gaareen Gabdhaha. Read More...
Arsenal oo hal dhibic u soo jirsatay Man City xiisana u yeeshay horyaalka PL.
Kooxda Arsenal ayaa maanta kulankii ay kooxda Newcastle uga hortagtay ku soo adkaatay 1-2 aadna ugu soo siqaysa hogaanka horyaalkan waxayna hadda xaga dhibcaha hal dhibic oo kaliya ka hoosaysaa kooxda Manchester City oo kaalinta labaad ku jirta.
Man City oo toban nin oo West Brom ku ciilbaxday. Kooxda Manchester City oo hogaanka horyaalka Ingiriiska kula tartamaysa kooxda Chelsea ayaa ku soo yaraysay dhibcaha laga horeeyo saddex dhibcood oo kaliya ka dib markii ay kulankii maanta 10 cayaartoy oo kooxda West Bromwich Albion ah 3-0 ku dardareen.
Kooxda Kubadda cagta Heegan ayaa 2-0 kaga adkaatay kooxda Jeenyo kulan ka tirsan horyaalka dalka.
kulankan oo ahaa kulanki 2-aad wareega labaad e horyaalka ayaa ka dhacay garoonka Banaadir waxaana u soo daawasho tagay Masuuliyiin uu ka mid ahaa wasiir ku xigeenka Wasaaradda dhalinyarda iyo isboortiga Cusmaan Aadan Dhuuboow, guddoomiyaha Guddiga Olombikada Soomaaliyeed Cabdullahi Axmed Tarabi, Ciyaartoydii hore Coonka iyo Killer iyo waliba dadwayne badan oo ciyaartan uga soo daawasho tagay gobolka Banaadir, shabeelada Hoose iyo Shabeelada dhexe.
Kooxaha Madrid oo ku kulmaya quarter Final ka horyaalka Yurub. Kooxaha ka wada dhisan magaala madaxda dalka Spain ee Madrid isla markaana sida aadka ah ugu xifaaltama kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa isku dhacay qorituurkii maanta loo sameeyey kooxaha sideeda ah ee isugu soo haray horyaalka qaaradda Yurub (Champions League).
Kooxda Heegan oo ka adkaatay Horseed kulan ka tirsanaa koobka Genaraal Daa'uud
Kooxaha kubada Kolayga Heegan iyo Horseed oo ayaa kulmay garoonka Wiish kulan ka tirsan wareega labaad ee koobka kubada kolayga Jeraraal Daa'uud.
Tartanka Da’yarta 15-jirada oo lagu soo gebagabeeyay garoonka Waamo ee Degmada Boondheere+ Sawirro
Tartankan oo ay ka qayb qaateen 8 koox oo ka dhisan afarta waax ee degmada Boondheere ka kooban tahay ayaa bilowday 8-dii Febraayo , Waax waliba waxaa laga soo xulay laba koox.
I.L.S oo guul ka gaaray Plasma kulan ka tirsan koobka Jenaraal Daa'uud
Kooxaha kubada kolayg I.L.S iyo Plasma ayaa ku kulmay garoonka Wiish ( Ex Luujino) kulan katirsan wareega labaad ee koobka kubada kolayga Jenearaal Daa'uud.
Garsoorayaal Soomaaliyeed oo mar kale dhexdhexaadinaya kulan caalami ah.
Xiriirka kubadda cagta e eqaarada AFrika Caf ayaa Garsoorayaasha heerka Caalami ee kubadda cagta dalkeena u soo magacaabay in ay dhex dhexaadiyaan kulan katirsan koobka koobabka qaarada Afrika ( caf Confedration Cup).
Page 13 of 16First Previous 7 8 9 10 11 12  14 15 16 Next Last Search Articles...